Muuri News Network » Suldaanka: Beesha Biimaal oo war degdeg ah kasoo saaray kuraasta xildhibaanada Cusub.
Suldaanka: Beesha Biimaal oo war degdeg ah kasoo saaray kuraasta xildhibaanada Cusub.
Warbixin uu soo saaray Suldaanka Beesha Biimaal Suldaan Ibraahim Suldaan Cali Xaaji isla markaaana lasoo gaarsiiyay xafiiska shabakadda muurinews.com ayaa lagu sheegay qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada aqalka hoose ay ka heli doonto beesha Biimaal.
Suldaan Ibraahim ayaa ku cadeeyay warbixinta uu soo saaray in xildhibaanada Beesha Biimaal ee aqalka hoose lagu soo kala xulidoono labada dowlad goboleed ee jubbaland iyo Koonfur Galbeed, maadaamada beeshu ay dhul ballaran kadegto labada dowladgoboleedba.
Waxa ayna u badantahay in lagu soo kala xulo caasimadaha ay hadda ku shaqeeyaan dowlad goboleedyadaas oo kala ah; Beydhaba iyo Kismaayo.
Ku dhawaaqidda halka lagu soo xulayo xildhibaanada ayaa timid kadib markii ay xilli yar ka ka hartay waqtigii lagu ballamay in lasoo dhameytiro xildhibaanada labada aqalba.
Waxaa sidoo kale soo baxaya xildhibaano hor leh oo doonaya in ay qeyb ka noqdaan xildhibaanada cusub ay soomaaliya yeelandoonto 2016ka bisha August; halka xildhibaanadii horay u jiray ay wali karaja qabaan in markale loodoorto ka mid noqoshada baarlamaanka cusub.